स्मार्ट बुहारी ,सासुको प्रिय बन्न चाहनुहुन्छ ? यी १० टिप्स अपनाउनुस -
स्मार्ट बुहारी ,सासुको प्रिय बन्न चाहनुहुन्छ ? यी १० टिप्स अपनाउनुस
के म मेरो पति र परिवारलाई खुसी राख्न सक्छु ? अक्सर नव-दुलहीको मनमा उठ्ने प्रश्न हो यो। र, यो स्वभाविक पनि हो । जब बुहारी बनेर अर्को घरमा प्रवेश गरिन्छ, सबै कुरा नौला हुन्छन्। परिवारका सदस्य, त्यहाँको वस्तुस्थिती, परिवारको रहनसहन, बानी व्यवहार, चालचलन भिन्न हुनसक्छ। अर्थात आफु हुर्किएको पारिवारिक वातावरणसँग मेल नखान सक्छ । यस्तो अवस्थामा हरेक नव-दुलहीले आफुलाई फरक परिवेश, फरक रहनसहन, फरक व्यक्तिहरुमाझ समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।परिवारको रहनसहन बुझेर आफुलाई त्यही अनुरुप प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय बुहारी यस्ता पनि हुन्छन्, जसले परिवारले मान्दै आएको संस्कार अंगाल्न चाहँदैनन्। यसले परिवारमा कलह हुन्छ। तर, कति बुहारी यस्ता हुन्छन्, जसले परिवारलाई थप सुमधुर र बलियो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छन्।
घर आफ्नै हो
Previous मङ्गला र पिङ्गला दशाको बारेमा अनविज्ञ हुनुहुन्छ ? आउनुस थाहा पाउनुस यसको प्रभाब र बच्ने उपाय
Next काठमाडौँमा घर बनाउने वा जग्गा किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? हो भने यो पढ्नुहोस